AirPods 3 oo leh koronto bilaa wireless ah iyo kiiska lacag -bixinta oo bixiya 20% lacag dheeraad ah | Waxaan ka imid mac
Horeba waa rasmi oo maalinta ku xigta 14 waxaan ku yeelan doonnaa munaasabad Apple khadka tooska ah ah taas oo la filayo in AirPods -ka cusub lagu dhawaaqi doono aaladaha kale. Sida laga soo xigtay xanta cusub ee ay sii daayeen falanqeeyayaasha astaanta, moodooyinkan cusub ayaa la imaan kara kiiska lacag -bixinta oo bixiya batari dheeraad ah iyo ku -dallacaadda bilaa -waayirka ah sida caadiga ah.
Taxane cusub oo dillaacay xisaabta Twitter -ka Pineleaks, oo uu hoggaaminayo daadiye Max Weinbach, ayaa sheegaya in Apple ay ku dhawaaqi doonto taxanaha Apple Watch 7, AirPods 3 iyo dhammaanba, dabcan ay weheliso iPhone 13 toddobaadka soo socda. Ka danbeeya Ku dhawaaqista rasmiga ah ee Apple, PineLeaks ayaa barteeda Twitter -ka ku sheegtay:
Iyada oo la raacayo ku dhawaaqista dhacdada Apple ee Sebtember, waxaan sii deyneynaa warbixinteena ku saabsan alaabooyinka Apple ee soo socda, oo ay ku jiraan iPhone 13, Apple Watch Series 7, iyo AirPods jiilka 3aad.
Fariintan ka dib dhawr kale ayaa yimid. Laakiin kuwa aadka noo xiiseeya ayaa ah kuwa tixraacaya jiilka cusub ee AirPods. Jiilka saddexaad ayaa imaan doona iyadoo la raacayo koontadan oo leh kiis dacwad ah waxay bixin doontaa ilaa 20% batari dheeraad ah, kaas oo lagu samayn doono bilaa wireless. Wax yar bay kaga duwanaan doontaa AirPods Pro, marka laga reebo baajinta buuqa. Laakiin maalin walba way isa soo tarayaan.
Kiiska Ku -dallacaadda Jiilka 3 -aad ee AirPods waa inuu helaa ku dhawaad ​​~ 20% batteriga weyn, marka la barbar dhigo Jen.
Ku -dallacaadda Wireless -ka waa muuqaal caadi ah.
Dhawaaqa guud waa inuu ahaadaa mid la mid ah sidii aad ku aragtay Jiilka 2aad, inkasta oo ay si gaar ah u wanaagsan yihiin basaska iyo darafyada hoose.
Intaa waxaa dheer, waxay ku andacoodaan inaan filan karno "Waxaa xusid mudan baska wanaagsan iyo dhamaadka hoose" marka la barbar dhigo jiilkii hore. Gudaha AirPods -ka, baytariyadu waxay la mid noqon doonaan Apple AirPods Pro.
Batariyada ku dhex jira AirPods laftoodu waa inay ahaadaan qiyaas la mid ah kuwa laga helay AirPods Pro hadda.
Ka hadlida baytariyada, Apple Watch Series 7 waxay ku qasban tahay inay aragto horumarkeedii ugu horreeyay ee nolosha batteriga tan iyo Apple Watch -kii asalka ahaa.
PineLeaks ayaa si sax ah u daadisay qorshayaashii hore ee Apple, oo ay ku jiraan faahfaahinta iPhones -kii hore iyo is -beddelka software -ka macruufka ee Apple. Markaa waa inaan tixgelinnaa farriimahaan usbuuca soo socda. Waqtigan xaadirka ah, kaliya warar xan ah oo la xaqiijin karo toddobaad gudihiis.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » AirPods 3 oo leh koronto bilaa wireless ah iyo kiiska lacag -bixinta oo bixiya 20% lacag dheeraad ah
Ford wuxuu saxeexay Doug Field, madaxweyne ku xigeenka mashruuca Apple Car